Mutsva WTTC mushumo unopa kurudziro yekudyara kwe post-COVID Kufamba & Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Mutsva WTTC mushumo unopa kurudziro yekudyara kwe post-COVID Kufamba & Tourism
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Theme Parks • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Julia Simpson, WTTC Mutungamiri & CEO
Sekureva kweshumo, hurumende nenzvimbo dzinofanirwa kuisa mari nekukwezva kudyara kubva kune yakazvimirira masisitimu munzvimbo dzakaita senge panyama uye nedhijitari zvivakwa, pamwe nezvikamu zvekufamba senge hutano, kurapwa, MICE, kuenderera, mutambo, tsika kana zvakanangwa - kusanganisira vakadzi , LGBTQI, uye inowanikwa - kushanya.
Global Travel & Tourism chikamu chakatambura zvakanyanya kupfuura chero chipi zvacho nekuda kwekurambidzwa kwakanyanya kwekufamba.
Travel & Tourism mupiro kuGDP yepasi rose yakadonha kubva padhora rinosvika $ 9.2 trillion mu2019to chete $ 4.7 trillion muna 2020.
Mari yekudyara mari yakadzikira kubva pa $ 986 bhiriyoni muna 2019 kusvika kungosvika $ 693 bhiriyoni muna 2020.
Sangano reWorld Travel & Tourism Council (WTTC) raparura nhasi mushumo wakakosha unopa kurudziro yekudyara kwehurumende nenzvimbo, sezvo vachida kuvaka nekukura chikamu chavo cheKufamba neKushanya.
Nedenda iri richiunza mafambiro epasi rose kunenge kumira kwakakwana, chikamu chePasirose neKushanya chakatambura zvakanyanya kupfuura chero chimwe nekuda kwekurambidzwa kwakanyanya kwekufamba.
Mupiro weichi chikamu kuGDP yepasi rose wakadonha kubva pamadhora US $ 9.2 trillion muna 2019, kusvika paUS $ 4.7 trillion chete muna 2020, zvichimiririra kurasikirwa kweUS $ 4.5 trillion. Zvakare, apo denda rakabvarura mukati memwoyo wechikamu, chinotyisa mamirioni makumi matanhatu nemaviri Ekufamba & neHurumende mabasa akarasika nepo vazhinji vachiri kungori panjodzi.
Chirevo chinoburitsa pachena kuti mari yemari yakadonhedzwa neinenge chikamu chimwe muzvitatu (29.7%) gore rapfuura, ichidzikira kubva paUS $ 986 bhiriyoni mu2019, kusvika kungosvika US $ 693 bhiriyoni mu2020 uye izvozvi, patinoenda kunaya, kudyara muTravel & Tourism kwave handina kumbobvira ndatsoropodza kudaro.
ichi WTTC bepa rinoratidza kukosha kwaro kwenzvimbo mbiri nehurumende kukwezva kudyara mari kuburikidza nenzvimbo inoshanda inogonesa, kusanganisira zvinokurudzira zvakadai semitero yakangwara, marongero ekufambisa, kusiyanisa, kusangana kwehutano nehutsanana, kutaurirana kwakanaka, uye nehunyanzvi uye vakadzidziswa vashandi.
Chirevo chinopawo mazano akakosha ehurumende nenzvimbo uye anosimbisa iwo zvikamu izvo zvinogona kuve zvinokwezva kune vanoita mari.
Jean-Marie Delort anoti:
Svondo 17, 2021 pa 04: 11
Nguva nyowani uye gumi idzva! Nyika iri kuchinja uye isu tinofanirwa kuchinjika neshanduko idzi. Nehurombo havazi vese hurumende vanotevera maTrends. Vafambi kuenda 3S kutsvaga, kumberi kwaive Gungwa, Zuva uye Sevhisi uye mazuva ano Smile, Yakachengeteka, Sustainability.